Izu Halo: Dobe Shock na zuru ezu | Akụkọ akụrụngwa
Izu Halo: Dobe Shock n'ụzọ zuru ezu
Microsoft na 343 Industries na-ekwuputa ọbịbịa nke "Halo Week: Drop Shock", ohere pụrụ iche ịnụ ụtọ ọtụtụ ọdịnaya "Halo 4" ọhụụ, yana onyinye pụrụ iche, ọnụ ahịa nkwado, ọdịnaya enwere ike ibudata na Mpịakọta 2 nke ụda mbụ. . Ma ị bụ ọkachamara Spartan ma ọ bụ na-amalite na Egwuregwu War, maapụ "Halo Week: Drop Shock", egwu na nkwalite ga-etinye ngwaọrụ niile gị na ndị enyi gị iji kwadebe maka agha na mkpịsị aka gị.
Ndepụta ahụ na nkọwa niile n'uju, ị nwere ya mgbe ịwụchara.
Mọnde, Eprel 8 - Castle Map Pack na-abịa Xbox LIVE
Iji bido n'izu a nke emume Spartan, Castle Map Pack ga-ebido ụwa niile taa bụ Mọnde, Eprel 81. Mepụtara site na ụfọdụ mmekọrịta na mmekorita ya na ụlọ ọrụ 343, Castle Map Pack na-enye ndị egwuregwu egwuregwu atọ na-atọ ụtọ nke ukwuu na nnukwu map ndị ị nwere ike iji zuru oke jiri ohere ụgbọ agha na oghere oghere, ndị nọ na atụmatụ otu ahụ bụ isi ihe ga-apụta. mmeri site n'ọgbọ agha.
Yana Castle Map Pack, 343 Industries na-ebuputa “Mpi Nwee Asọmpi” (CSR), sistemụ ọhụụ ọhụrụ nke na-atụle arụmọrụ onye ọkpụkpọ na Egwuregwu War site na-eche ya ihu na asọmpi dị iche iche na ndị ya na ha nwere ikike yiri nke ahụ nke na - egosikwa n'usoro na profaịlụ Halo Waypoint gị. Site na elekere 11 nke ụtụtụ ruo Eprel 00 ruo 8:11 nke Eprel 00, ndị egwuregwu ga-enwe ike ịnwale onwe ha na ndepụta nke Egwuregwu War "Castle DLC" na ihe omume nke iru ma ọ bụ karịa ọkwa 22, nweta avatar ọhụrụ pụrụ iche.
Tuesday, April 9 - Mgbapụta nke Mpịakọta nke 2 nke mbụ "Halo 4" Soundtrack
Site na ebumnuche nke inweta otu ihe ịga nke ọma dị ka Original Soundtrack nke "Halo 4", ọrụ nke ndị na-ede ihe nrite bụ Neil Davidge, 343 Industries na-ekwuputa mmalite nke mpịakọta nke abụọ, na mmekorita ya na 7Hz Productions. Xbox 360 ga-enyefe na profaịlụ mba ụwa na Twitter ọtụtụ koodu nbudata maka ndị ọrụ ole na ole, iji mee ememme a. Ya mere nọrọ na-ekiri maka @ Xbox posts.
Mpịakọta 2 nke Soundda mbụ nke “Halo 4” gụnyere ngụkọta nke egwu 20 na-ejide ma na-arụ ọrụ mbara igwe egwu nke egwuregwu ahụ. Iri na otu n’ime utu aha ndị a bụ ihe ndị Neil Davidge kere, ebe 8 n’ime ha bụ nke Kazuma Jinnouchi, onye na-edebe rieslọ Ọrụ 343. Soundda ahụ na-agụnyekwa nkọwa nke Kazuma n'onwe ya nke akụkọ mgbe ochie "Echefula" site na "Halo 3" nke Martin O'Donnell na Michael Salvatori. Abụ ndị dị na Mpịakọta nke 2 na-agbaso usoro usoro oge, dị ka ọdịdị ha dị na egwuregwu ahụ, ka onye ọrụ wee nwee mmetụta mgbe ọ na-ege ha ntị na a na-ebuga ha ozugbo na ụwa nke "Halo 4".
Mpịakọta nke 2 nke "Halo 4" Soundtrack ga-adị malite Eprel 9 na www.halo4soundtrack.com
Wenezdee Eprel 10 - Kwalite Spartan gị na Ihe XPma Aka XP
343 rieslọ ọrụ dị iche iche kpebisiri ike iji kpoo asọmpi ọhụrụ nke XP ọzọ n'oge "Halo Week," yabụ gị na ndị enyi gị nwere ike iweli ọkwa Spartan gị ngwa ngwa site na igwu egwu n'ịntanetị.
Site na nsogbu iri na anọ kwa ụbọchị na isii kwa izu, ndị egwuregwu ga-enwe ohere ị ga-enweta ihe Nlekọta Ahụmịhe site na ịsọ mpi na ọnọdụ "Halo 14" ọ bụla, ma ọ bụ Egwuregwu War, Spartan Ops ma ọ bụ ọnọdụ Mgbasa Ezubere ihe ịma aka ndị a maka "Halo Week: Drop Shock" na ebumnuche nke iji ndị na-akwụghachi ụgwọ ọrụ karịa XP karịa na ihe ịma aka ọkọlọtọ. Ihe ịma aka kwa ụbọchị ga-agba otu ugboro kwa ụbọchị n’ime izu, yabụ nọrọ na nche iji merie ọtụtụ i nwere ike.
Tọzdee, Eprel 11 - Spartan Ops Day nwere ihe osise pụrụ iche
"Halo Week" agaghị ezu ezu na-enweghị a ụbọchị karịsịa raara nye ekele Spartan Ops. Ma ị na-egwu egwu naanị ma ọ bụ na-emekọ enyi ruo mmadụ atọ, ndị egwuregwu ga-enwe ike ịchọpụta n'akụkụ ọ bụla nke Requiem site na isi-nzube wuru ma meghee ihe nzuzo nke ụwa dị omimi. Malite na 11: 00AM na Eprel 11 wee kwụsị na 11: 00 AM na Eprel 21, ndị egwuregwu ndị mezue ọrụ 5 Spartan Ops ga-enweta naanị avatar.
Ndị na-egwu egwuregwu ga-enwe ike ịkọghachi ọhụụ kachasị amasị ha site na Oge Otu nke Spartan Ops site na ịnara ya site na mbụ ihe omume, n'oge "Halo Week: Drop Shock."
Fraịdee, Eprel 12 - ọdịnaya nbudata maka "Halo 4", na ire ere na Xbox LIVE
Ma oburu n’inweghi Wargames Map Pass ma obu Map abuo ohuru a, na Fraide i gha zuta ihe ndi a “Halo 4” nbudata na ego efu. Ndepụta ọnụahịa bụ ndị a:
Wargame Maps Pass: Ihe 1600 Microsoft (nke mbu 2000)
Mpempe Osisi Crimson: Ihe Microsoft 600 (na mbụ 800)
Ebube Map dị ebube: Ihe Microsoft 600 (na mbụ 800)
Xbox 360 ga-eme “Halo Week: Dobe Shock” site na nsogbu site na netwọkụ mmekọrịta ha, egbula oge ịgbaso profaịlụ ha na Twitter yFacebook ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji merie avatars na nanị ọdịnaya.
Ozi ndị ọzọ - Halo 4 na MVJ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Izu Halo: Dobe Shock n'ụzọ zuru ezu
Samsung WB250F, igwefoto igwe eji eme otutu ihe na ihe omuma ohuru
Nitecore EA4, otu n’ime ezigbo ọkụ batrị AA nwere ike iji ọkụ zụta